Obboo Aadam Tiinnaa Jaarraa: ''Koloneel Aliyyii Cirriin nama uumamaan gabrummaaf hin jilbeeffanne'' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Koloneel Aliyyii Cirriin waggaa 96'tti boqotan
Gootichi qabsoo ummata Oromoo yeroo dheeraaf falmachuun beekaman, koloneel Aliyyii Cirrii, umurii waggaa 96'tti du'anii har'a sirni awwaalcha isaanii raawwateera.
Koloneel Aliyyii qabsaa'oota oromoo bara mootummoota H/Sillaasee fi Dargiitti abbaa biyyummaa ummata Oromootiif qabsa'aa turan keessaa tokko turan.
Sirna awwaalcha goota kanaa har'a Godina Baalee aanaa Madda Walaabuu magaalaa guddoo aanichaa Bidiree irraa km 33 irratti kan argamtu ganda maddaatti raawwatameerrattis, ummanni bakkeewwan garaa garaa irraa babahe kuma hedduu ta'u argameera.
Awwaalchi Koloneel Aliyyii Cirriis haaluma wayita isaan lubbuun jiran gaafataniin, iddoo kanaan dura Jeneraal Waaqoo Guutuufi Koloneel Aadam Jiloo Weeboo itti awwaalamanitti raawwatame.
''Uumaa isaaniin nama gabrummaadhaaf gadi hin jenne.
Obbo Aadam Tiinnaa Jaarraa, Obboleessa koloneel Aliyyii Cirrii
Eddoon awwaalchi isaanii itti raawwatame kunis bakka seenaa qabeessaafi kan amma galmi seenaa Madda Walaabuu itti ijaaramaa jirudha. Koloneel Aliyyii Cirriinis bakka dhaloota isaaniitti osoo hin taane bakka qabsoo itti eegalanitti kan awwaalaman.
Sababni awwaalcha achitti raawwatamees, kabajaa fi oolmaa isaan qabsoo ummata Oromoo keessatti gumaataniif jedhu Obboleessi isaanii Obbo Aadam Tinnaa Jaarraa.
Dhukkubbii waggoottan shan dura eegale yeroo adda addaatti isaan dhukkubaa tureen boodarra dulluma waliin isaanitti cime Sambata darbe ganama hospitaala Madda Walaabutti boqotaniiru.
Obboleessi isaanii yeroo dhukkubsatanitti waliin turan Obbo Aadam Tiinnaa ''haalli islaamummaa keessa jiraatus haaluma aadaa Oromootiin awwaalchi isaani raawwate,'' jedhaniiru.
Akka bulchaa Aanaa Madda Walaabuu Obbo Jamaal Hasan jedhanitti, tasgabbiidhuma naannichaatiin walqabatee sirni awwaalchaa nagaan akka raawwatuuf qophii guddaatu taasifame ture.
Sirna awwaalcha Koloneel Aliyyii Cirrii kana irrattis, artistoonni, keessummoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, godinaa fi magaalota naannichaa adda addaa irraa dhaqan argamaniiru.
Goodayyaa suuraa Sirna owwaalcha koloneel Aliyyii Cirrii irratti ummanni kuma hedduutti lakkaa'amu bakka addaa addaati dhufe hirmaateera
Koloneel Aliyyii Cirriin eenyu?
Koloneel Aliyyii Cirriin abbaa isaanii Obbo Cirrii Jaarraa fi harmee isaanii aadde Baddeessoo Miinaa irraa godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa ganda Cirrii jedhamtutti A.L.I bara 1914 akka dhalatan qorannoon waajjira aadaa fi turizimii aanaa Madda Walaabuu ni mul'isa.
Gootichi baddaa Baaleetti gootummaa guddaa raawwatan, Koloneel Aliyyii Cirrii Jaarraan, nama maatii dhaabbachuun haadha warraa torba irraa ijoollee dhiiraa 20 fi dubara 22 godhatani turan.
Koloneel Aliyyiin ijoollummaa isaanitti wal'aansoo, dorsoo, fi fiigicha kan jaallatanii fi booda wayita waggaa kudha saddeeti guutan ammoo gara qabsootti makamu isaanii seenaan isaanii ni mul'isa.
Akka Obbo Aadamitti, Koloneel Aliyyiin bara 1937 qabsaawaa Oromoo Mahammaad Gadaa Qaalluutti dabalamani lola hedduu irratti hirmaachaa turani.
''Uumaa isaaniitiin nama gabrummaaf hin jilbeefanne turan. Nama jaalatamaa qabsoo keessatti loltummaa fi hoggansaan illeen maqaa gaarii qabani turan,'' jedhu Obbo Aadam Tiinnaa.
Seenaan qabsoo Koloneel Aliyyii kunis kitaaba 'Seenaa Gootota Oromoo fi Kaan' jedhu keessatti bal'inaan barreeffame jira.